News - သာမာန်ဆူးဝါယာကြိုးကိုအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ခြင်း
ကွင်းဆက် link ကိုခြံစည်းရိုးစက်
ဆူးဝါယာကြိုးကိုလိမ်ပြီးအပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဆူးဝါယာကြိုးစက်ဖြင့်ချုပ်ထားသည်။ အများအားဖြင့်အများအားဖြင့်သံထည်သုံးထည်၊ ဆူးဝါယာကြိုး၊ ဆူးဝါယာကြိုးဟုလူသိများသည်။ ချောထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ: တစ်ခုတည်းဝါယာကြိုးလိမ်ကျစ်နှင့်နှစ်ဆဝါယာကြိုးလိမ်ကျစ်။ ကုန်ကြမ်း - အရည်အသွေးနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုး။ မျက်နှာပြင်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် - Electro-galvanizing၊ hot-dip galvanizing, ပလပ်စတစ်အပေါ်ယံလွှာ, ပလပ်စတစ်မှုတ်ဆေး။ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဝါနှင့်အခြားအရောင်များရှိသည်။ အသုံးပြုမှုများ - မြက်ခင်းပြင်များ၊ ရထားလမ်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများစသည်တို့ကိုသီးခြားကာကွယ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဆူးဝါယာကြိုးသည်ဆူးဝါယာကြိုးစက်မှတဆင့်နှင့်အမျိုးမျိုးသောရက်လုပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်များမှတဆင့်အဓိကဝါယာကြိုး (strand ဝါယာကြိုး) ပေါ်တွင်ဆူးသံဝါယာကြိုးအကွေ့အကောက်များစေခြင်းဖြင့်လုပ်သီးခြားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပိုက်ကွန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူးဝါယာကြိုးအတွက်လိမ်နည်းသုံးနည်းရှိသည်။ ရှေ့လိမ်၊ နောက်လှည့်နှင့်ရှေ့လှည့်ခြင်း။
အပြုသဘောဆောင်သောလိမ်နည်းလမ်း - သံမဏိဝါယာကြိုးနှစ်မျိုးသို့မဟုတ်သံဝါယာကြိုးနှစ်မျိုးကိုသံကြိုးကြိုးနှစ်ချောင်းဖြင့်လှည့်ပြီးသံကြိုးနှစ်ချောင်းသံကြိုးဖြင့်ပတ်ပါ။
Reverse လှည့်စားနည်း။ ပထမ ဦး စွာ၊ ဆူးဝါယာကြိုးသည်အဓိကဝါယာကြိုး (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ခုတည်းသောသံဝါယာကြိုးတစ်ခု) ပေါ်တွင်အနာရောက်သည်။ ထို့နောက်သံဝါယာကြိုးကိုလိမ်ပြီးလိမ်ကာနှစ်ဆသောကြိုးဆူးဝါယာကြိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောကောက်ကျစ်သည့်နည်းလမ်း: ၎င်းသည်ပင်မသံကြိုး၏ပတ်ပတ်လည်၌ဆူးဝါယာကြိုးကိုပတ်ထားသောလမ်းကြောင်းမှဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းသို့လိမ်သည်။ ဒါဟာတ ဦး တည်း ဦး တည်ချက်အတွက်လိမ်မပေးပါ။
မျက်နှာပြင်ကုသမှု၏အကြောင်းပြချက်သည်ချေးခြင်းခံနိုင်ရည်အားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သက်တမ်းကိုရှည်စေခြင်းဖြစ်သည်။ သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး၏မျက်နှာပြင်အားသွပ်ရည်စိမ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ PVC ဆူးဝါယာကြိုး၏မျက်နှာပြင်ကုသမှုကို PVC ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်းဆူးပင်သည်အနက်ရောင်ဝါယာကြိုး၊
အလူမီနီယမ်ခြုံထားသောဆူးဝါယာကြိုးသည်စျေးကွက်သို့တင်လိုက်သောထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ကိုအလူမီနီယမ်အလွှာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အလူမီနီယမ်သည်သံချေးမကျကြောင်းလူတိုင်းသိသောကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အလူမီနီယမ်ထည့်ခြင်းသည်ချေးခြင်းခံနိုင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးကြာရှည်ခံစေသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ ဘဏ်များ၊ အကျဉ်းထောင်များ၊ ငွေစက္ကူပုံနှိပ်စက်ရုံများ၊ စစ်သုံးစက်များ၊ ဘန်ဂလိုများ၊ နံရံများနိမ့်သောနေရာများနှင့်အခြားနေရာများတွင်စက်လှေများကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား BWG ဆံပင်အကွာအဝေး3" ဆံပင်အကွာအဝေး4" ဆူးအကွာအဝေး5" ဆံပင်အကွာအဝေး6"
12x12 6.0617 ၆.၇၅၉ ၇.၂၇ 7.6376
12x14 7.3335 7,9051 8,3015 8.5741
12-1 / 2x12-1 /26.9223 ၇.၇၁၉ 8.3022 8.7221
12-1 / 2x14 8,1096 ၈.၈၁၄ ၉.၂၂၂၂ ၉.၅၆၂
၁၃x၁၃ 7.9808 ၈.၈၉၉ ၉.၅၇၂၁ 10.0553
၁၃x၁၄ 8.8448 9.6899 10.2923 10.7146
13-1 / 2x14 9,6079 10.6134 11.4705 11.8553
14x14 10,4569 11,659 12.5423 13.1752
14-1 / 2x14-1 /211.9875 13.3671 14,3778 15,1034
15x15 13,8927 15.4942 16.6666 17.507
15-1 / 2x15-1 /215.3491 ၁၇.၁၄၄ ၁၈.၄၀၆ 19.3386
စုစုပေါင်းအလေးချိန် X (ရှယ်ယာစျေးနှုန်း X70% + ဆူးဝါယာကြိုးစျေးနှုန်း X30%) + အပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေ
၁။ ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နောက်ဆုံးသုံးဝါယာကြိုးအနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းအပေါ်မူတည်သည်။ နိုင်ငံ၏သံမဏိထုတ်လုပ်မှုပိုလျှံမှုကြောင့်သံမဏိစျေးနှုန်းများကျဆင်းခဲ့သည်။ ဝါယာကြိုးလှံတံ၏တစ်တန်စျေးနှုန်းသည်တစ်တန်ကန်ဒေါ်လာ ၂၅၈ ခန့်ရှိသည်။
2. ဝါယာကြိုးလှံတံအပြောင်းအလဲနဲ့၏စျေးနှုန်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်, ဆူးဝါယာကြိုး၏သတ်မှတ်ချက်များအမှတ် 14 သံဝါယာကြိုး (220mm) နှင့်အမှတ် 12 သံဝါယာကြိုး (260mm) ဖြစ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် ၂၂၀ မီလီမီတာသတ်မှတ်ချက်အရ electro-galvanized ဝါယာကြိုးအတွက်အပြောင်းအလဲအနေဖြင့်တစ်တန်လျှင် RMB ၇၅၀ ခန့်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာမဖော်ပြထားတဲ့ Hot-dip galvanizing နဲ့ပလပ်စတစ်အပေါ်ယံပိုင်းစတာတွေရှိတယ်။
3. ထုတ်ယူခြင်းကုန်ကျစရိတ်။ 220mm ဆူးဝါယာကြိုး, ဆူးအကွာအဝေး 12com ဖြစ်ပါတယ်, တစ်တန်နှုန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေယွမ် 320 ။
ထို့ကြောင့်စက်ရုံကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည်တစ်တန်လျှင် ၂၂၀ မီလီမီတာသာမန်ဆူးဝါးတစ်တန်လျှင် ၂၅၈၀ + ၇၅၀ + ၃၂၀ = ၃၆၅၀ ယွမ်ရှိသည်။ ကုန်တင်မပါဝင်ပါ။ ၀ ယ်ယူသူမှဆူးဝါယာကြိုးဈေးသည်မြင့်တက်သည်ဟုခံစားရလျှင်၎င်းကိုသင်အနည်းငယ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ စျေးနှုန်းလျှော့ချ။ ဤသည်ကိုမြင်လျှင်, လူတိုင်းဆူးဝါယာကြိုး၏စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိမရှိငါမသိ? လှည့်ဖြားခံရခြင်းမှရှောင်ရှားရန်မဝယ်ခင်ပစ္စည်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်လူတိုင်းအားသတိရသည်။
post အချိန်: စက်တင်ဘာ -16-2020
Lixinzhuang စက်မှုဇုန်၊ Dingzhou, Hebei, China